Omatasatasa idolobha Vilnius - inhloko-dolobha kuliphi izwe? Kuyinto enkulu kunazo zonke edolobheni e Lithuania, elaliyisikhungo esibalulekile isayensi, isiko kanye nezemidlalo. Inhlokodolobha Lithuanian has amapaki eziningi, izihlahla, utshani kanye nezinye izikhala green, siyamjabulisa iso Iphalethi eliqhakazile imibala ehlobo. izikhala Green - amapaki kanye namahlathi - zakha ingxenye enkulu emzini Vilnius. Inhloko-dolobha ye kuliphi izwe, uma kungekhona e Lithuania, ukwanelisa isifiso lezihambi ukuhlanganisa evakashele emangalisayo izindawo zomlando zomuzi omdala futhi ujabulele uhlobo. I-Old Town kuyinto simangalele lathumela, futhi unyaka ngamunye izinkulungwane zabantu izivakashi. Muva nje, i Old Town sasitholakala njengoba uhlelo lemihlaba by UNESCO.
Ngokusho yetinsita afike wasungula khona iSikhungo emzini Duke Gediminas endaweni lapho amaphupho akhe ngiphupha i impisi yensimbi. Eqinisweni, le ndawo lokuqala limiswa protobaltami, futhi kwachuma phakathi nokubusa Gediminas. Prince abamenyiwe ababazi, abathengisi nabefundisi iNtshonalanga Yurophu ekhatsi Vilnius, ebhekisela ezimbili Amasonto amaKatolika umuzi izithembiso isikhundla nelungelo. Ingxenye yencwadi yakhe ayibhalela ngesiLatini e 1323 - kukhulunywa okokuqala bokuba khona emzini Vilnius.
izakhiwo eziningi edolobheni ningofakazi umlando waleli zwe. On Castle Hill ungakwazi zibabaza Gediminas Tower, okuyinto wawuyingxenye Upper Castle izikhulu Lithuanian. Phansi egqumeni eduze isonto lombhishobhi imele Isigodlo Grand Dukes of Lithuania, alungisa ngo-2009. Kamongameli Palace (umbusi wangaphambili) Kukhona. Kanti enye izimpawu zendawo eziningi mlando kanye yenkolo Vilnius.
Izwe lase zokugcina isimo yobuqaba eYurophu nase yodwa e 1387 waphoqeleka ukuba ebuKristwini. Namuhla, u-79% naseLithuania - amaKatolika.
amasonto eziningi e Vilnius
Inhloko-dolobha ye kuliphi izwe usengakwazi ukuziqhayisa amasonto amaningi kangaka ngokomlando Katolika nasemasontweni obu-Orthodox, aphuma Orthodox ukuba Uniates namaKatolika? Ngo nenkathi yamaSoviet, abaningi babo babekhonza ivaliwe wancishwa imisebenzi yenkolo. Vilnius Isonto amelela izitayela ezahlukene yezakhiwo ezifana Gothic futhi Classicism, Baroque kodwa uhlala omunye izitayela ethandwa kakhulu izakhiwo ezisemadolobheni. Ekhatsi Vilnius lubonakale siqu, "Vilnius" version of the Baroque, isibonelo esigqamile saleli - uPetru noPawulu esontweni Antakalnis.
Ayethi: "Uma udinga imali, iya Lodz, noma uma udinga inhlakanipho - yiya Vilnius." Inhloko-dolobha yombuso wezwe ngesikhathi lokunikeza malungelo kumaJuda? Edolobheni, zazivunyelwa ukuba nokuhweba ngenkululeko ukuthola imfundo at Vilnius University nezikole eziningi Talmudic. Kube yashicilelwa iphephandaba abangamaJuda, izikole abasebenza kanye imitapo yaqhakaza ukuphila zhizn.ligioznaya zenkolo. Ngo-1939, e-Vilnius kwakukhona 105 emasinagogeni izindlu ngomthandazo, futhi amaJuda ngokomthetho mayelana 30% wesibalo sabantu.
Owabe izikebhe endaweni Vilnius Užupis wakhethwa abaculi ekupheleni le XX leminyaka ke kwathiwa Republic Užupis. Le ndawo ubhekwa umfowabo ayiwele naye besifunda ka Montmartre Paris.
Yini izitshalo babe fibrous uhlelo impande? Izinhlobo uhlelo isitshalo impande
Uyini zezinqola zayo ngokuthi: umsuka, alisebenzi emazweni lasendulo
Indatshana eyayinesihloko esithi "Umthwalo" - indlela ukubhala?
"Kusukela Pindemonti": ukuhlaziya A. inkondlo S. Pushkina
Isibhedlela ukuze Vanguard, Petersburg: ikheli, yocingo, odokotela Izibuyekezo
Growing ukhukhamba endle futhi abamba ukushisa
Abadlali of the ifilimu "Focus": Will Smith, Margot Robbie, uRodrigo Santoro